ISKU DAR "NIVA" SK-5: SIFOOYINKA FARSAMADA IYO QAABABKA HAWLGALKA - INFRASTRUCTURE
Dhamaan "nafta" ee mashiinkaan waxaa lagu xiraa dhirta Rostselmash. Dhammaadkii 1950-yadii, injineerada maxaliga ah waxay keeneen SK-3-ga isdhexgalka ah. Wixii shirkad ah, waxay ahayd furfurnaan - ka hor intaan, waxaa la soo saaray oo keliya unugyo la raadinayey. Troika waxay leedahay kayd ballaadhan oo waaweyn, oo ay adeegsadeen naqshadeeyayaasha, kuwaas oo "soo saaray" qaabka waxsoosaarka SK-4 ee 1962-kii. Waxay u muuqatay mid aad u guuleysatay, iyagoo soo ururiyay abaalmarino badan oo ku saabsan bandhigyada beeraha kala duwan.
Qasaasin noocaas oo kale ah oo loo adeegsaday saldhigga "shan". Horumarinta iyo kicinta waxay qaadatay waqti badan - markii ugu horreysay ee SK-5s lagu sii daayo 1970-kii, saddex sano oo kale ayaa badeecad cusub la soo saaray iyadoo la barbar dhigtay horay loo yaqaanay.
Isla mar ahaantaana waxay qaadatay inay si fiican u sameyso qaabka ugu horreeya - "prototype" waxay diyaar u ahayd bilowgii 1967.
Waa muhiim! Ku orodka waxaa ku jira laba nooc - Lacag la'aan (2.5 saacadood) iyo shaqeyn (60 saacadood). Marka ugu horeysa ee aan shaqeynin, naaftada waxaa loo oggol yahay in ay shaqeyso ugu badnaan nus saac. Iyadoo wareegsan xeeladaysan, culeyska ayaa si tartiib tartiib ah u kordhay ilaa 75%, iyadoo lala socdo kormeerka khasabka ah iyo dayactirka sida waafaqsan heerarka ETO 10kii saacadoodba mar.
Dadaalka injineeriyadu maaha mid aan waxtar lahayn - way adagtahay in la helo qof aan waligiis arag tan "halyeeyga beeraha". Waxa uu ku adkaystay dayactir badan, "nuqullada" cusub ayaa wali la sameynayaa. Qaadku wuxuu noqday mid raaxo badan, midab casaan ayaa loo beddelay cagaar, iyo tirada sheyga oo la waayay, beddelay ereyga "saameyn". Laakiin qaabka la xaqiijiyay wuxuu u shaqeeyaa sida ugu fiican.
Halkee la isku daraa?
Meelaha ugu muhiimsan ee "hawsha" ee qaabkani waa nadiifinta iyo soosaaridda siriyalka. Iyadoo loo eegayo qiyaasta miisaankeedu badan yahay iyo maneuverability ee isku darka, waa wax aad u fiican in lagu shaqeeyo meelaha cidhiidhiga ah ama xaaladaha dhul adag.
Waxa kale oo jira nooc ka mid ah carrada daciifka ah, carrada qoyan. Kani waa mashiin leh wadada semi-tracked, taas oo sidoo kale ay ku takhasusay geedka. Dhaqdhaqaaqayaasha mashiinka qibrad leh waxay og yihiin in "cidhiidhiga", "Nivas" caadiga ah looma siman yahay - xaaladahaas oo kale waxay ku siin doonaan isugeyn xoog leh oo dibadda laga keeno.
Si aad u fahamto sida ay u soo jiidaneyso SK-5 Niva, waa inaad tixgelisaa astaamaha farsamooyinka ee hadda jira ee asaasiga ah:
engine: six-silyl-in-line in-line dhafan leh supercharged, afar-stroke;
Awooda (hp): 155;
Xawaaraha dharka (rpm): 2900;
tirada mindiyaha: 64;
mugga qulqulka (l): 3000;
xawaaraha xawaaraha (l / s): 40;
Ma taqaanaa? Waxyaabaha isbeddelka lagu soo rogay iyo gawaarida gaar ahaaneed. Maxay ugu yaraan isku dhafan tahay inay kala soocaan miraha bocorka laga bilaabo qashir-saarka, abuuray 1970-yadii. Laakiin waxay ahayd hal tusaale.
dhererka raritaanka (m): 2,6;
Nooca nadiifinta: laba-muuqaal;
dhererka madaxa (m): 5;
dhererka wadarta socodka cawska (m): 3.6, wuxuu ka kooban yahay 4 qaybood;
habka wax lagu tumayo: nooca daboolka;
dhexdhexaadiyaha (m): 0.6;
nooca kamarad jilicsan: Gaadiidka;
dhererka (m): 7.60;
dhererka (m): 4.1;
miisaanka qalalan (t): 7.4.
Isku darka Mishiinka
Casriga "Niva" oo leh qalabka naaftada MMZ - D.260.1. Qiyaasta injirta ee 7.12 litir waa mid u fiican shaqooyinka kala duwan.
Xaqiiqdu waxay tahay in uu leeyahay shey wanaagsan oo tiknoolaji ah (622 N / m), kaas oo bixiya xeelad fiican xittaa gaabis buuxda ah ama marka uu gudbinayo qayb adag. Baabuurtu waxay noqon karaan "aan looxunneyn" illaa 2100 rpm, laakiin marka la eego waxay isku dayayaan in ay "qabtaan" celceliska (illaa 1400) - qaabkani ugu sareeya awoodda ayaa la gaarey.
Qaboojinta dareeraha waa wax aan lagama maarmaanka u ah shaqada beeraha, marka la eego makiinadda mitrooga ah ee Minsk waa la doorbidi karaa "hawada hawada".
Wixii hawlaha dheeraadka ah, waxaad sidoo kale u baahan doontaa gadaal, cagaf iyo tareen yar.
Miisaanka cutubkani waa 650 kg. Laga soo bilaabo faa'iidooyinka muuqda, shaqada nacfiga ah iyo "cunto yari" dhexdhexaad ah ayaa lagu xusay. Isticmaalka shidaalka baasaboorka loogu talagalay Niva oo isku darka shidaal lagu qalabeeysanayo qalabkani waa 25 liitar saacad kasta. Tiradani way kala duwanaan kartaa iyadoo ku xiran hadba nooca hawlaha la qabtay iyo sida saxda ah ee hagaajinta naaftada.
Waa muhiim! Haddii bilowga kowaad ee mishiinka lagu fuliyo heerkul ka hooseeya +5 ° C, ka dibna saliidda lagu shubay warshadda waa in lagu beddelaa M8 jiilaalka (dareeraha leh indices DM iyo G2K waa ku habboon yihiin).
Sida "qalbiga" ee mashiinkani wuxuu sidoo kale u dhaqmi karaa sidan oo kale:
SMD-17K iyo SMD-18K (labadaba - 100 HP);
Soodhawrka 120-ka ee SMD 19K, 20K iyo 21K oo dheeraad ah.
Dhammaantood waxaa loo sameeyaa sida ay u socdaan nidaamka isku-dhafan oo leh 4 silsiladood, laakiin waxay luminayaan "lix-nooc" MMZ marka la eego awoodda iyo isticmaalka - way yar yihiin.
Kooxdani waxay ka kooban tahay 2 buundo: wadida wadida gawaadhida iyo xakamaynta.
Dabcan, kan ugu horreeya wuxuu ku adag yahay dhismaha. Waxay ka kooban tahay:
2 qoryaha dhinacyada;
gawaarida tooska ah.
Qalabaynta Niva CK-5 oo caan ah ayaa isku darka shaygadu waa saddex marxaladood, oo leh qalab 3 shillin iyo digaag, 2 ka mid ah ayaa loo rogay (sida sideyaal) oo ku dhegay mashiinka wadada.
Marka ugu horeysa "guntado" qalabka ugu horeeya, iyo kan labaad - xawaare labaad iyo labaad. Kadib markaad gudbinayso gudbinta, "diyaarsan" bilaash ah ayaa lagu xiraa hab gaar ah.
Gawaarida qaada ee gawaarida ee sanduuqa sanduuqa waxaa lagu dhejin doonaa qoryaha dhagxaanta, halka bareeraha oo leh caawimo 12 iloodheed ah ay ku riixayaan dhinaca gudaha gudaha gadaashiisa. Haddii xadhiggu ka baxo, xirmadu waxay sii deyneysaa qayba-leexsiinta oo waxay dib udhigeysaa wareegga wareegga.
Ma taqaanaa? Qaybihii ugu horreeyay ee Soofuuriyadii la soo dhajiyay waxaa la soo saaray 1930kii Zaporizhia. Marka la eego jaangooyooyinka maanta, gawaarida waxaa lagu magacaabaa ruuxa wakhtiyada. - "Communard".
Qodobka duur-qaadashada ayaa si fudud u qalabaysan:
trapezoid ee bacda leh silsilad hydraulic;
Qalabyada wheelka waxaa lagu qabtaa dariiqyada kuuskuubka ah iyadoo la isticmaalayo moodooyinka iyo xididada. Hubsigu waxay ku xiran yihiin dhuubyada iyaga laftooda iyaga oo leh muraayad xiran.
Dhammaan isbeddellada isku-darka ah waxaa lagu rakibayaa darawalka klinoremenny. Si fudud u dhig, daqiiqada ka imaanaysa mootada waxaa loo gudbiyaa musqulaha gawaarida suunka, iyo geeddi-socodka oo dhan ayaa lagu xakameynayaa kala duwanaanta.
Nidaamkan, oo beddelaya baabuur-wadida gaariga, wuxuu u guuraa suunka weelka hoostiisa, sidaas daraadeed bedelida ballaca daadka. Suunka laftiisa isla wakhtigu wuxuu u guurayaa si qoto dheer ama waxaa lagu muujiyaa "geeska" (ka dibna dhexdhexaadku wuu kordhaa). Qalabaynta nidaamka waxaa lagu xakameynayaa gaaska shidaalka, ee gacanta lagu soo galo. Si aad u bixiso xawaare buuxa, waxaa loo wareejiyaa waddada horay loo maro, iyo in dib loo dhigo xawaaraha.
Cab iyo isduljun
Marka la eego raaxada, Niva waxay soo jiidatay shuruudaha casriga ah. Sababtoo ah qalabka wax lagu duubo oo cusub, ayaa si fiican loo naqshadeeyey, oo waxay noqotay mid aad u raaxaysatay oo gudaha ah - marka la eego qaababkii hore ee wadajiruhu, xaqiiq ahaan, sanduuq bir ah oo kulul leh oo leh hawo nadiif ah. Gawaarida cusub ayaa lagu siinayaa shardiga (runta, sida ikhtiyaar).
Waa muhiim! Marka aad iibsanayso isticmaalka la isku daro, fiiro gaar ah u yeelo xaaladda birta (ka dib markaad eegto dhammaan noodhalka hoose), shidaalka iyo nidaamka hidaha. "Meelo xanuun" nuqullo jir ah - Tani waa, ugu horreyntii, qaabka iyo maskax-furka, dhoobada markiiba "waxay ku dhufataa" iyaga.
Ku fadhiisashada goobta shaqada, darawalku wuxuu arkayaa isaga hortiisa:
Xuquuqdeeduna waa xariijinta qalabka korontada, fardargelinta goonida ah iyo kuwa bareeb ah;
dhinaca dhinaca bidix ee isteerinka istiraatiijiga ah waa barayaasha xarkaha iyo garaaca fareebka;
hoostiisa mashiinka istiraatiijiga ah waxaa ku jira shidaal shidaalka ah, oo ah noocyo kala duwan oo laga heli karo labada dhinac ee "donut".
Kursiga cirifka ayaa la qaboojin karaa laba diyaaradood (horizontal iyo vertical). Dhinaca midigta, geeska cabirka, waa guddi qalab leh oo leh laydhadh iyo digniin.
Qalabka waxaa sidoo kale lagu rakibay halkaa - tilmaamayaasha cadaadiska saliidda iyo heerkulka biyaha, taakuleeyaha dhoobada iyo ammanka. Dakhliga dambe waxaa laga yaabaa inaanay noqon - beeralay badani waxay dhigeen gaashaamo fudud.
Meelo farabadan waxaa lagu hayaa qeybta koontaroolidda nidaamyada iyo nidaamyada shaqada: duufaan, madax, "daadinta" tuugada, iwm.
Ma taqaanaa? Markii ugu horeysay ee isku-dhafan ee isku-dhafan ee USSR waxay ahayd C-4 (1947-1958). Waxaa la yaab leh in siyaasaddu ay faragelisay " - illaa iyo 1956 waxaa loo yaqaan "Stalinist", kaddib markii Shirweynihii labaatanaad, magaca ayaa hoos u dhacay waraaqda hore.
Qalabka darawalka (gawaarida) waxaa lagu xakameynayaa caawinta hydraulics - ma jiro farsamo toos ah oo dhexdhexaad ah oo u dhexeeya dirawalka iyo giraangirta, qof kastaa wuxuu qaataa nidaamka korantada iyo nidaamka qaboojinta iyada oo loo marayo dareeraha shaqeynaya ee lagu soo rogay bamka qiyaasta. Habkani wuxuu si weyn u yareynayaa dib u dhaca, laakiin waxaa jira dhibaatooyin. Sidaa darteed, iyada oo si sax ah u hagaajinta mashiinka isteeshanka ayaa sidoo kale noqda "dhagan".
Waxaad baraneysaa MT3-892, MT3-1221, Kirovets K-700, T-170, MT3-80, Vladimirets T-25, MT3 320, MT3 82 iyo T-30 tractors kuwaas oo loo isticmaali karo noocyo kala duwan oo shaqo ah .
Isku darkaas wuxuu leeyahay 2 nidaamyo hiddo-wadaha ah. Cidina waxay u adeegtaa unugyada shaqaynta, iyo isugeyntu waxay sahlaysaa xakamaynta.
Naqshadeynta wareegga ugu muhiimsan waxaa ka mid ah:
nooca bamka NSH-32U;
bixiyaha 7da baxa;
silsiladaha hidde-gelyada ee kor loogu qaadayo madaxa iyo calaamadda.
Markaa, wareegga wareegga waxaa ka mid ah:
shaqaale (isagu waa awood) boodh.
Labada noocba waxay isticmaalaan dareeraha 14 tan luubo.
Waxay sidoo kale noqon doontaa mid waxtar kuu leh si aad u barato astaamaha farsamada ee Salyut 100, Neva MB 2, miro-yar-yar ee Zubr JR-Q12E.
Isku darka sheyga
Isku darka "Niva" waa mid ka mid ah nidaamyada ugu muhiimsan, muhiimadda badanaa waxaa badanaa lagu dhejiyaa mashiinka. Qeybaha waaweyn iyo qaybaha waa:
Kiiska oo dhammaan qaybaha shaqada ee la xiray. Waxay ku xiran tahay kamarad jilicsan iyadoo la isticmaalayo suufka iyo faashadda. Qaab dhismeedkan oo dhan wuxuu isku dheelitiraa ilaha adag. Waxay ku xiran tahay qalabka telescopic-ka ee la xirxiray iyadoo la heli karo mindiyaha.
Waa muhiim! Ka hor intaanad isku keenin wadada loogu talagalay guuritaanka, waa in tuubo looxo la saaro - Xitaa yar yar ayaa la mamnuucayaa.
Kabaha, hagaajinta dhererka gooyaa. "Xag" ayaa loogu talagalay 5 iyo 18 cm, halka ikhtiyaaraadka dhexdhexaadintu yihiin 10 iyo 13 cm.
Iska ilaali cawska markaad goynaysid isla markaana ku hagaajinaysid auger. Xaqiiqdii, waa mashiinno leh iskudhafyo go'an, kuwaa oo ay ku xiran yihiin tuubbo yaryar oo leh farood (faro) (faro). Waxay, marka loo eego, waa guga-gaaban.
Jarjirta. On bar ah waxaa jira farood oo keliya oo leh saxarado jilicsan oo ku wareegaya jihooyinka kala duwan. Waxaa intaa dheer, waxaa sidoo kale jira xargaha boodboodka iyo taarikada rooga. Dhaqdhaqaaqa mindiyaha waa farabadan "hinge - telescope."
Auger. Tani waa silsilad leh cajalooyin "kala duwan" oo leh "spearals" oo leh noocyo kala duwan - waxay ku socdaan jihooyin kala duwan, iyo inta ay wareegayaan waxay u beddelaan afkoda dhexe. Halkaas waxaa lagu soo qaadayaa farta gaar ah, kaas oo u soo diraya qoyaankan wareejiyaha.
"Qulqulaya" gawaarida. Waxaa la sameeyaa midkale oo keenaya hadhuudhka. Halkan waxaa ku yaal 2 dabaq oo leh xiddigo ku yaal geesaha - hogaaminaya iyo kaxeynaya. Silsilado silsilad leh silsilad bir ah ayaa "masuul ka ah" gaadiidka.
Pickup. Wuxuu ururiyaa baalalka baalalka oo u diraya "hoose" ee madaxa. Si aad u rakibto waxay u baahan doontaa in laga saaro qalabka.
Isbedelada weyn ee isku darka
Marka lagu daro qaabka asaasiga ah, "wakiillada" ee isbeddelada kale waxay ku jiraan socodka. Waxaa jiray wax badan oo iyaga ah oo ku dhow 50 sano oo la sii daayay, sidaas darteed waxaan diiradda saari doonaa kuwa ugu caansan. Waxaa si fudud loo sheegaa - waraaqaha iyo indiraada dijitaalka ayaa lagu darayaa "SK":
5A waxay tilmaameysaa 120 gawaar oo hp ah;
Ma taqaanaa? Qaar ka mid ah negu "Niva" ayaa soo galay wax soo saarka qolalka nadiifinta ah ee nadiifinta SKT-2. Aad ayay ugu fiicnayd beeraha - xaaladaha yaraanta qaybaha lafa-gurista, qaybaha "tamaandhiga" ayaa isku beddelay "shan" caadi ah oo aan kala go'in wax soo saarka.
Nidaamka 5am wuxuu ku qalabaysan yahay 140 gaari oo koronto ah, gawaarida waxaa loo rogay dhinaca bidix;
5M-1 way kala duwan yihiin gudbinta hydrostatic;
SCC-5 waxaa loogu talagalay in ay ka shaqeyso aagagga leh dhul adag oo "qaadataa" dabacsan ilaa 30 °;
SKP-5M-1 waa isbeddel yar oo la gashado "ciid" qoyan.
Dhamaan waqtiga qalliinka "Niv" waxa soo ururay waayo-aragnimo aad u ballaaran, iyo qof kasta oo la shaqeeyay qalab beeraha ah wuxuu ogyahay "dabiicadda" ee isku darkaasi.
Waxay leeyihiin faa'iidooyin badan:
maneuability good leh cabbirka yar;
helitaanka qaybo kasta oo lafagurid iyo nadaafad sare;
tayada la aqbali karo nadiifinta;
waxqabadka wanaagsan ee yaraanta khasaarinta yar.
Waxaa sidoo kale jira waxyaabo khaas ah:
mararka qaarkood "duulaya" suunka lagu wado;
Dhibaatooyinka ku saabsan kor u qaadista madaxa iyo lifaaqyada; in ka badan hal jiil oo ka mida mishiinnada mashiinka "abuuray" ee duruufaha goobaha kala duwan ee kala duwan, dhejinta iyo brackets;
ma aha mid si fudud u soconaya oo buuxda oo buuxa.
Waa muhiim! Dad badan ayaa ka cabanaya dhibaatada "dirirta". Tan waxaa laga yaabaa in ay sabab u tahay xoqidda dabka hidaha ama isbedel aan habooneyn.
Inkasta oo cilladahaas oo kale, "SKY" 5 jir ah kuma guul daraysato dhulka. Bilawga beeralayda ayaa si ikhtiyaari ah u qaata "isticmaalka" isku dhafka iyo, iyagoo maalgashanaya xoogaa xoog ah iyo macne, iyaga oo ka faa'iideysanaya sanado badan. Qodobbada laf-dhabarka ah waxay dammaanad qaadayaan "Niva" nolol dheer.
Hadda waxaad taqaanaa waxa ay sameeyeen qaab-dhismeed aad u fiican. Waxaan rajeyneynaa in macluumaadkani uu kaa caawin doono go'aaminta doorashada teknoolajiyada. Diiwaannada wax soo saarka!